Amabhakabhaka angompetha be-Nedbank 2013/2014 | Eyethu News
Iyiphakamise kanje indebe i-Orlando Pirates kade ithatha eyeNedbank Cup.
EMDLALWENI obugcwele ukuhluthuka kwezinhliziyo, ukuhluthulana ngezibhakela nokuphushana okuphethe ngokuba abadlali abambalwa bathole amakhadi aphuzi, ezikaMagebhula zibhaxabule kabuhlungu iziTshudeni ngamathathu kwelilodwa.
Kulomdlalo obusezinkundleni zemidlalo i-Moses Mabhida ngoMgqibelo ntambama, zithezibekwa nje abafana base-Orlando abebevutha bhe umlilo bacishe balivalela phakathi ngesikhathi ibhola ebelikhahlelwe u-Kermit Erasmus, livinjwa unozinti we-Wits u-Moneeb Josephs.
Ziqhubekile ezikaKhoza zilokhu zihlasele njalo, kepha kwalekhona ukuthi balivalele phakathi, nokuthe ngomzuzu ka-26 umdlali we-Bidvest Wits, u-Jabulani Shongwe washaya elihle igoli elishiye unozinti we-Pirates, u-Senzo Meyiwa ebambe umoya.
Bekubonakala ukuthi abafana base-Orlando bakulambele kangakanani ukwemuka nesicoco se-Nedbank, kepha bengenayo inhlanhla yokushaya igoli. Lona phela besekungumqhudelwano wesine aMabhakabhaka efinyelela kowamanqamu. Emqhudelwaneni we-MTN 8 bashaywa i-Platinum Stars ngesikhathi ibephuca ithuba lokuvikela lendebe ekuqaleni kwe-season. Okwesibili kube umqhudelwano we-Telkom laphoi-Platinum Stars yayiphinda ngenduku futhi i-Pirates, yemuka nesicoco. Kuthe ngesikhathi labafana abangapheli umoya bedlala emqhudelwaneni we-Africa CAF Champions League behlulwa kabuhlungu kowamanqamu iqembu lase-Egypt- Inkanyezi yaboyesibili sebeyibheke ngabomvu.
Kepha ukungapheli moya kwabadlali be-Pirates kubonakale ngesikhathi sebedlala kowe-Nedbank, lapho beshaye khona izinkunzi eziningi zebhola- okubalwa kuzo ne-Sundowns, ukuze bafinyelele kowamanqamu.
Isilomo salomdlalo kubengu-Kermit Erasmus oshaye amagoli amabili, eqinisekisa ukuthi amaBhakabhaka emuka nendebe. U-S’fiso Myeni yena ushaye igoli lesibili le-Pirates ngomzuzu ka-63, kanti elokulinganisa lingene ngomzuzu ka-53 siqalile isiwombe sesibili.Emva kwalokho kube inzuka Zikeyi iziTshudeni zizama ukulinganisa, kepha kwanhlanga zimuka nomoya,ama-Bucaneers ala ukhasha.
Emva kwalomqhudelwano abafana bakaKhoza bemuke nendebe nesamba sika-R7 wezigidi- nokuthe uma isibalwa yonke imali eliyizuzile kule-season leliqembu yalinganiswa nesizumbulu zika-R27 wezigidi- nokwedlule wonke amaqembu adlala kwi-PSL ngalese-season ka-2013/2014.
Usathungatha ikhaya elisha ochithwe i-Royal Eagles.